ကျွန်မက ဟီဂျဘ်ဝတ် တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ - News @ M-Media
in ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် သတင်းများ / အာရှ-ပဖိဖိတ် — April 20, 2017
‘ကျွန်မက ဟီဂျဘ်ဝတ် တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ’ ဆိုတဲ့ ဒီ ဗီဒီယိုအတိုလေးထဲမှာ
ဘာသာအယူဝါဒတွေအားလုံး အနည်းအနဲ့အများ နှိပ်ကွပ်ထားတဲ့ ကွန်မြူနစ် တရုတ်နိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူ့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို နှလုံးသားမှာ ဘယ်လို တည်တံ့စေသလဲ…
ဘာသာတရားက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အိနြေ္ဒသိက္ခာရှိမှု တန်ဖိုးကို ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းထားလဲ ….
ပညာပြည့်ဝ နှလုံးလှအောင်လုပ်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို အံတုကာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်မှာ ဘ၀ကို ဘယ်လို ရပ်တည်သလဲ …. စတာတွေကို ရှုစားရမှာပါ။
BBC သတင်းဌာနက တင်ဆက်တဲ့ ဒီဗီဒီယိုအတိုလေးကို မြန်မာနိုင်ငံက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတွေ အတုယူ လေ့လာနိုင်အောင် M-Media က ဘာသာပြန်ဆို ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်မွတ်စလင်များ၏ ဆွေမျိုးမေ့မည့် ရိုးရာ အစားအစာများ (Apr 28, 2017)
Google ၏ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်များ အစီအစဉ်အတွက် ပါကစ္စတန်အမျိုးသမီး ရွေးချယ်ခံရ (Apr 24, 2017)
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း မွတ်စလင်အမျိုးသမီး ဗိသုကာပညာရှင်၏ လက်ရာတစ်ခု ယူအေအီးတွင် ထွက်ပေါ်လာမည် (Apr 2, 2017)
မွတ်စလင်အားကစားမယ်များအတွက် အထူး ဟီဂျဘ်တစ်မျိုးကို Nike ထုတ်လုပ် (Mar 8, 2017)
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့အကြို အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းရည်ကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ Emirate လေကြောင်းလိုင်း (Mar 7, 2017)
တရုတ်သိုင်းပညာသမိုင်းတွင် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်နေသည့် ဟွေမွတ်စလင်များ (Mar 2, 2017)
ဟီဘာဟ် ရဟ်မာနီ (သို့မဟုတ်) နာဆာမှ မွတ်စလင် ဒုံးပျံအင်ဂျင်နီယာပညာရှင် (Feb 23, 2017)
အီဂျစ်တွင် အမျိုးသမီး လေယာဉ်မှူးတစ်ဦး သမိုင်းမှတ်တိုင်သစ် စိုက်ထူ (Feb 20, 2017)
အီရန်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာကျော် စစ်တုရင်အားကစားမယ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (အင်တာဗျူး) (Jan 17, 2017)
၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း အဖ တိုင်းပြည်ကို ကြီးကျယ်အောင်လုပ်ခဲ့သည့် အမေရိကန် မွတ်စလင် အမျိုးသမီးများ – အပိုင်း (၃) (Dec 15, 2016)
Tags: china muslim, Islam in China, muslim women